Tsika ASUS ROG STRIX Radeon RX 6800 XT "AMD Big Navi GPU" Inonzi Inosimudzira Beyond 2.5 GHz Ine 290W TGP
October 25, 2020 Dai 8, 2022 0
Ruzivo rwakawanda maererano nekumhanya kwewachi kweiyo AMD Radeon RX 6800 XT tsika "Big Navi" makadhi emifananidzo akabuda ne Patrick Schur. Mune yake yazvino tweet, Patrick anotaura nezve iyo AMD Radeon mifananidzo kadhi, iyo ROG STRIX Radeon RX 6800 XT kubva kuASUS, iyo inonzi inouya nemawachi ekuwedzera anopfuura 2.5 GHz.
ASUS ROG STRIX Radeon RX 6800 XT Na AMD's Big Navi "Navi 21 XT" GPU Zvinonzi Zvimiro Zvinosimudzira Mawashi Kupfuura 2.5 GHz pa 290W TGP
Ruzivo rwacho rwakavakirwa painjiniya bhodhi masampuli saka mawachi ekupedzisira uye TGPs anogona kusiyanisa asi zvinonakidza kungoti kureba sei maAIBs akakwanisa kusundira AMD's Big Navi GPUs, kunyangwe iri mukati. ASUS's ROG STRIX Radeon RX 6800 XT ndiyo yakasarudzika modhi nhasi & pane matatu masisitimu akataurwa naPatrick ayo akaedzwa mukati me 3DMark 11, ese aine akasiyana wachi kumhanya. Iyo RX 6800 XT inonzi inomhanya neyakaiswa TGP ye290W uye 1000 MHz memory wachi inomiririra 16.00 Gbps memory inofa.
Heano mimwe mhedzisiro ine TGP ye255 W. Usandibvunze kuti ndeupi musiyano uripo pakati pe255 W na 289 W mamodheru.
Zvichida yakawanda OC yemusoro wemumba uye yakadzikama yekuwedzera mawachi?
WeMedhia: 2357 MHz
WeMedhia: 2342 MHz
- Patrick Schur (@patrickschur_) October 25, 2020
ASUS ROG STRIX Radeon RX 6800 XT Tsika Yemifananidzo Kadhi Yakataurwa Maawa:
Avhareji - 2291/2289/2092 MHz
Median - 2373/2301/2320 MHz
Max (Kuwedzera) - 2556/2394/2489 MHz
Kune zvimwe zvinyorwa zvakaonekwa naPatrick pa255W TGP zvakanyorwawo pazasi
Avhareji - 2298 / 1993 MHz
Max (Kuwedzera) - 2509 / 2557 MHz
Chinhu chekutanga chakataurwa na leaker ndechekuti vatyairi vaive nezvimwe zvinhu ndosaka kumhanyisa wachi kweiyo tsika AMD Radeon RX 6800 XT kadhi yemifananidzo haina kuenderana sezvainofanirwa kuve. Misiyano mikuru muvhareji kumhanya wachi inofanira kugadziriswa nenguva iyo makadhi akarova pamusika.
Zvakare, mutsauko uripakati pe255W & 290W TGPs haugone kutaridzika zvakanyanya asi zvinokwanisika kuti makadhi epamusoro eTGP anounza yakanyanya kuwedzeredza musoro-kamuri uye kumhanya kwemawachi akatsiga. 3DMark 11 hachisi chimwe chinhu chatinofanira kufunga chinorema-mutoro wemakadhi emifananidzo e2020 saka mamwe mashandisirwo emazuva ano anoda kuongororwa nguva dzekumhanya kwewachi dzisati dzamirirwa pamamodeli ekupedzisira.
AMD Radeon RX 6900 Series Tsika TBP manhamba naNavi 21 XT GPU (Mufananidzo Credits: Igor's Lab)
Kamwe zvakare, iwo 290W & 255W manhamba eiyo AMD Radeon RX 6800 XT mifananidzo ndeye TGPs iyo AMD hwaro paGPU neVRAM simba roga. Haisi iyo yakaenzana neNVIDIA's TGP inova ndiyo nhamba yebhodhi rese. Igor aive zvakare waiti iyi uye 290W TGP musiyano inofanirwa kupedzisira iine huwandu hwesimba bhodhi remazana e350-355 Watts.
Tiri kuwedzera kana kushoma kuwana tsika dzakasiyana munaNovember kana idzi nhoroondo dzakarurama asi misiyano yepamusoro kubva kune yega AIB inogona kutarisirwa panopera kupera kwaNovember kana pakati paDecember zvichibva mukuwanikwa kweiyo Big Navi GPUs ye AMD's Radeon RX 6800 XT Graphics kadhi.
AMD Radeon RX 6800 XT Navi 21 XT & Radeon RX 6800 Navi 21 XL GPUs
Iyo AMD Radeon RX 6800 yakateedzana icharatidza maviri RDNA 2 akavakirwa mifananidzo makadhi, iyo Navi 21 "Big Navi" yakavakirwa Radeon RX 6800 XT uye iyo Radeon RX 6800. Iyo AMD Radeon RX 6800 XT ichauya izere neNavi 21 XT GPU inova yakatemwa-pasi SKU iine 72 Makomputa maYuniti kana 4608 SPs. Iyo kadhi inozoisawo 16 GB yeGDDR6 ndangariro kuyambuka 256-bit bhazi interface, 512 GB / s yakazara bandwidth, uye kumhanya kwewachi yeiyo 2015 MHz base uye 2250 MHz inowedzera pane mareferenzi specs. Nezuro, zvaive Zvinonzi iyo Navi 21 XT inogona kuisa TBPs yakakwira kunge 320W yekureva uye 355W yemhando dzakasiyana.
Iyo AMD Radeon RX 6800 kadhi yemifananidzo inozoisa yakanyanya kutemerwa Navi 21 "Big Navi" GPU ine 64 Compute Units ye4096 stream processor. Kadhi racho richaratidza imwecheteyo VRAM config ye16 GB GDDR6 memory, 256-bit bus interface asi zvakanzi kadhi rinozopedzisira riine yakaderera zvishoma memory memory ye14 Gbps iyo ichaendesa net net bandwidth ye448 GB / s . Iyo GPU ichaita kumisikidza wachi kumhanya kwe1815 MHz mutambo uye 2105 MHz inowedzera mawachi pane mareferenzi maficha. Izvo zvakataurwa zvakare kuti iyo AMD Radeon RX 6800 ine Navi 21 XL GPU inogona kuisa TBP ye290W muma stock wachi.
AMD ichaita zviri pamutemo kuvhura yayo RX 6000 yakateedzana kadhi yemifananidzo kadhi mhuri muna Gumiguru 28th. Hafu yechipiri ye2020 yaizove inguva dzinonakidza kune vese vanofarira zvemahara uye vatambi vePC vari kutarisira kutarisira maPC avo neakanakisa Hardware.
Ndeipi iyo AMD Radeon RX 6000 Series Graphics Kadhi iwe yauri kutarisira kune yakanyanya?
AMD Inoburitsa Iyo Radeon RX 6000 Series: RDNA2 Inotanga Kune Iyo Yakakwira-Kuguma, Kuuya Mbudzi 18th
AMD Ryzen 4000 'Zen 3 Vermeer' Desktop CPU & Radeon RX Navi 2X 'RDNA 2' Graphics Makadhi Anotarisirwa Kuunza muna Gumiguru 2020
AMD Radeon RX 6800 XT Nhema Dhizaini Graphics Kadhi Yakatarirwa Mune Iyo Sango
Sapphire Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, RX 6650 XT Custom Graphics Makadhi Akaburitswa & Akanyorwa Pamhepo Nevatengesi
AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB Graphics Kadhi 3DMark Benchmarks Leak Kunze - Kunokurumidza Kupfuura Iyo GeForce GTX 1660 Ti